YEYINTNGE(ကနဒေါ): Wednesday, March 17
Today, Chairman of the Parliamentary Friends of Burma (PFOB) sent the letter to Chairman of SPDC Senior General Than Shwe and its Foreign Minister regarding electoral laws.
PFOB consists of Members and Senators from all parties of the Canadian Parliament.
Chair Parliamentary Friends of Burma (PFOB)
BY YeYint Nge ... 3/17/20100comment
http://www.mediafire.com/?y2mnit2qddz17 March2010 Yeyintnge Diary
၁၇/ မတ် ၂၀၁၀
နအဖဘက်က သေနတ်သံစထွက်ပါပြီ၊ အမြောက်သံလို့ ဆိုရင်လည်း ရပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာကတော့ စစ်ကြေညာတာပါ။ သူတို့နဲ့ မတူသူမှန်သမျှကို၊ တပြည်လုံးကို စိန်ခေါ်လိုက်တာပါပဲ။
ဆက်တိုက်ထွက်လာတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုတာတွေဟာ ပစ်မှတ်ရှိရှိ ဦးတည်ချက်ရှိရှိ ပစ်လိုက်တဲ့ ကျည်ဆန်တွေ၊ ဗုံးဆန်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုပစ်တာ၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကို ရည်ရွယ်တာ စတာတွေကို အထူးပြောနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ နအဖအလိုတော်ရိတွေကိုတောင် ဆွံ့အသွားစေလောက်အောင် ထင်ရှားလှတဲ့ ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ထောင်ထဲကို ရောက်နေတဲ့လူတွေ နိုင်ငံရေးပါတီထဲမှာ ပါဝင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာဟာ အတိုက်အခံတွေကို ဦးတည်တယ်ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ဥပဒေဘောင်တွင်းမှာ နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ အစိုးရကဖမ်းဆီးတယ်၊ အပြစ်ချတယ်ဆိုတာ ဘာမှ မဆန်းတဲ့ကိစ္စပါ။ အခု နအဖရဲ့ ဥပဒေအရ လူတယောက်ဟာ ထောင်ကျခံလိုက်ရတာနဲ့ တပြိုင်နက် တရားဝင် နိုင်ငံရေး လောကရဲ့ အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်သွားတော့မှာပါ။ ဒါဟာ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကို သွေးခွဲတာ၊ အားနည်းအောင်လုပ်တာ၊ ဖျက်ဆီးတာ သက်သက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တခြားပါတီများရဲ့ အတွင်းရေးကို ၀င်စွက်တာလို့ပြောရင်လည်း ရပါတယ်။ ဒီလိုအပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရသူတွေ ပါတီဝင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ ဥပဒေမျိုးဟာ အရင်က မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ပါဘူး၊ ကိုလိုနီခေတ်တုန်းကတောင် မရှိပါဘူး။ ဖဆပလလက်ထက်တုန်းကတော့ ထောင်ထဲကနေပြီးတော့ လွှတ်တော်အမတ် ၀င်အရွေးခံခဲ့တာတွေတောင် ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရပြီး အမတ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အတိုက်အခံအမတ်တွေ အတော်များများရှိခဲ့ပါတယ်။ ကွယ်လွန်သူ ကဗျာဆရာကြီး ဦးတင်မိုးရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း ရေစကြိုက ကျောင်းသားအမတ် ကိုကျော်ဟာ ၁၉၅၆ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ထောင်ထဲကနေ အရွေးခံပြီး အမတ်ဖြစ်ခဲ့သူတဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ ကိုကိုးကျွန်းကို အပို့ခံခဲ့ရပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာ ဒီချုပ်အခက် ဒို့အကွက်ဆိုပြီး ခေတ်ပျက်အမတ်လုပ်ချင်ကြတဲ့လူတွေ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်တခု ထောက်ပြလိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်သမိုင်းမှာ ကိုလိုနီခေတ် မင်းတိုင်ပင်အမတ်ကစလို့ မဆလခေတ်အထိ အမတ်ဖြစ်ခဲ့သူတွေ အမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ဂုဏ်သရေတကယ်ရှိခဲ့၊ ကိုယ်တိုင်က တကယ်ဂုဏ်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အမတ်မျိုးဟာ အများက အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တင်မြှောက်ခံရတဲ့ အမတ်တွေသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အာဏာရအစိုးရရဲ့ နည်းမျိုးစုံညစ်ပတ်၊ ဖိနှိပ်မှုတွေအကြားက အမတ်ဖြစ်လာသူတွေကို ပြည်သူတွေက သတိရနေကြပါတယ်။ မဆလခေတ်က အမတ်ဖြစ်ခဲ့သူတွေဟာ သူတို့နာမည်နောက်မှာ မဆလလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို အသားယူ တွဲချိတ်ကြလေ့ မရှိသလောက်ပဲဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ ဒီတခါ နအဖရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမတ်ဖြစ်လာရင်လည်း နောင်မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှက်နေရမယ့်အဖြစ်နဲ့ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
နအဖဟာ သူတို့သက်တမ်းတလျှောက်မှာ သူတို့နဲ့မတူသူတွေကို စံကျတဲ့သွေးခွဲနည်းတွေနဲ့ သွေးခွဲရင်ဆိုင်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထဲက ‘တတ်သိ’ အစုတွေကို ဖမ်းဆီးတဲ့နည်းနဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ထဲက ခွဲထုတ်ခဲ့သလို ငြိမ်းအဖွဲ့တွေကိုလည်း ခွဲလိုက်တာမှ အစိတ်စိတ်မြွှာမြွှာဖြစ်ကုန်တဲ့ အထိပါပဲ။ အခုလည်းပဲ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်တယ်ဆိုတာ ကလေးတောင် သိပါတယ်။ ဒီလိုအနေအထားအောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ “ဘောလုံးဟာ တဖက်ကွင်းထဲရောက်နေပြီ” လို့ပြောပြီး ဒူးနှန့်နေကောင်း နေပါလိမ့်မယ်။
ဒီဥပဒေတွေဟာ နအဖအစိုးရက ဖန်တီးထားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြည်တို့ရဲ့ “စကားပြောပွဲ” ရဲ့ ရလဒ်လားလို့ မေးလိုက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ နအဖဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ မရိုးသားမှု၊ စဉ်းလဲမှုတွေကို တခါထပ်တွေ့ရတာပဲလို့ ပြောရမှာပါ။ မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို မြင်လိုမှု၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်အပေါ် အားတက်နေမှု၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေထံပေးစာကို ဘယ်လိုအကြောင်းပြန်မလဲလို့ သိချင်နေကြတဲ့ မျှော်လင့်မှု၊ ဒါတွေအားလုံးကို နအဖက အခု တချီတည်းနဲ့ အပြတ်အဖြေပေးလိုက်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အုပ်စုရယ်လို့ စဖြစ်ပေါ်လာကတည်းက ဒင်းတို့ဟာ လက်နက်ကိုင်တပ်အားကိုးရှိနေတော့ ဘယ်တုန်းကမှ တဖက်သားနဲ့ စေ့စပ်တယ်လို့ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ စေ့စပ်တယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတေ၊ွ ၀ါဒဖြန့်တာတွေကို အသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့ကျတော့ တဖက်သားကို လက်နက်ချခိုင်းတာချည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ ငြိမ်းအဖွဲ့တွေနဲ့ မပြေမလည်ဖြစ်နေတာရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းဟာလည်း ဒါကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဒီရွေးကောက်ပွဲကို အဲဒီမူအတိုင်းပဲ ထပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ဆီကို လက်နက်အကြိမ်ကြိမ်ချနေသူတွေ၊ သူတို့ပြောသမျှ လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့လူတွေသာ ဒီအစီအစဉ်ကို ထောက်ခံပြီး ကျန်တဲ့ ကိုယ့်သိက္ခာ ကိုယ်တန်ဖိုးထားသူမှန်သမျှက လက်မခံနိုင်ဖြစ်နေတာပါ။ ၁၉၉၈ ခုတုန်းက အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အမတ်များက ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း လွှတ်တော်ခေါ်ပေးဖို့ပြောတော့ နအဖက လူတွေ အများကြီး ဖမ်းဆီးခဲ့တာကို ပြန်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အခုတော့ သူတို့က အဖွဲ့ချုပ်ကို ရက် (၆၀) သတ်မှတ်ပေးပြီး မှတ်ပုံတင်ခိုင်းနေပြီ မဟုတ်လား။ ဒါနဲ့တဆက်တည်း ငြိမ်းအဖွဲ့တွေကိုလည်း နောက်ဆုံးရက်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ချည်း တောင်းဆိုနေတာနဲ့ တွဲကြည့်လိုက်ရင် စစ်အစိုးရဟာ နိုင်ငံရေးမှာလည်း အခွင့်အရေးနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို လက်နက်ပြပြီး ဓားပြတိုက်သလိုသာ လုပ်တယ်ဆိုတာကို ထပ်တွေ့ရပါမယ်။
နအဖရဲ့ ဒီခြေလှမ်းဟာ အထက်မှာပြောခဲ့သလို အတိုက်အခံတွေနဲ့၊ ပြည်သူလူထုကို အဖြေပေးကြေညာလိုက်တာ ဖြစ်ရုံသာမက နိုင်ငံတကာရဲ့ သဘောထားအမျိုးမျိုးကိုလည်း တပါတည်းအပြတ် တုံ့ပြန်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ “နအဖလေးကို ပစ်မထား ကြပါနဲ့၊ ဆက်ဆံကြည့်ကြပါ” လို့ ပြောနေသူတွေ၊ “နည်းနာသစ်နဲ့ ချဉ်းကပ်မယ်” လို့ဆိုသူတွေ၊ “အပြင်မှာမထားနဲ့ အထဲကို သွင်းပြီး ပြောင်းလဲယူရမယ်” လို့ ဆိုတဲ့သူတွေ အားလုံးကို အခု နအဖက အဖြေပေးလိုက်ပြီ မဟုတ်လား။ နအဖဆိုတာ နအဖပဲ။ စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်ပဲဖြစ်ကြောင်း ထပ်ပြလိုက်ပြန်ပါပြီ။
ဒီတော့ ဒီတပွဲမှာလည်း သေနတ်သံစထွက်တာဟာ နအဖဘက်က ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မှတ်တမ်းတင်ဖြစ်အောင်တင်ရပါမယ်။ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့် တင်းမာမှုတွေဟာ ဒီသေနတ်သံကြောင့် ဖြစ်လာတာတွေလို့ ဆိုရမှာပါ။ တကယ်လို့သာ နအဖ ဘက်ကသာ ငြိမ်းချမ်းရေးတေးသံထွက်လာရင် ပိုမိုစိမ်းလန်းစိုပြည်တဲ့ အကျိုးဆက်ကိုမြင်ရနိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အလားအလာဟာ ဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေရောက်နေပါပြီ။ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဖန်တီးတာလို့ ဆိုနေတဲ့သူတွေ မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ အခု တင်းမာမှုအသစ် ထပ်ပေါ်လာပါပြီ။ လွယ်လွယ်နဲ့ ပြေလည်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
နအဖရဲ့ အစဉ်အလာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ပြန်ကြည့်ရင် အခုအခါ သူတို့ဘက်က အကုန်လုံးအသင့်ပြင်ပြီးသားလို့ ယူဆစရာ ရှိပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ထုခွဲနေတာတွေကိုက အဲဒီလို ပြင်ဆင်မှုတွေထဲက တခုလို့ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဖောင်ဖျက်တယ်လို့ ပြောရင်တောင် ရမလားပါပဲ။ ရေဒီယိုတွေ၊ သတင်းဌာနတွေရဲ့ အဆိုအရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ တခြားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေလည်း အသီးသီးပြင်ဆင်နေရတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ တောင်စွယ်နေမကွယ်မီ ရင်ဆိုင်ကြတော့မှာပါ။
ဒါဟာ နိဂုံးရဲ့အစတောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဂျိုးဆက်ဖ် ဘောလ် (Joseph Ball) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မတ်လ ၁၇ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၀၄ မိနစ်
နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကြာလာသည့်တိုင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးက ရှေ့မတိုးနိုင် တန့်နေရသည်။ အဓိက အတိုက်အခံ ပါတီကြီးက ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အတိုင်း တရားမျှတမှု ဖြစ်လာစေရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေခဲ့သည်။ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့ကသာ မြန်မာနိုင်ငံကို အမှန်တကယ် ဦးဆောင်ရခြိမ့်မည်။
ဤအချိန်တွင် မျှော်လင့်ထားကြသည့်အတိုင်း ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပလာမည့် ရွေးကောက်ပွဲက တရားမျှတပြီး လွတ်လပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဖြစ်စေ၊ တိုင်းပြည်၏ အကွဲအပြဲ ပဋိပက္ခများကို ရင်ကြားစေ့ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် မျှော်လင့်ချက် မရှိသလောက် နည်းနေသည်။ အင်အားစုအများ အပြန်အလှန် နားလည်နိုင်မှုနှင့် နိုင်ငံကို မည်သို့မည်ပုံ ရှေ့ဆက်ချီတက်မည်ဆိုသည့် လမ်းကြောင်းအပေါ် သဘောတူညီမှု စသည့် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်များလည်း လျစ်လျူရှုထားခံနေရသည်။ ဆက်လက်၍ ပစ်ပယ်ထားဆဲဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရက ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ထဲတွင် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေများ ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အဖို့ မလွဲမရှောင်သာ အကျပ်အတည်း လမ်းဆုံလမ်းခွနှင့် ကြုံလာရသည်။ ပါတီအနေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အခြားသော ထင်ရှားသည့် ခေါင်းဆောင်များကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ထုတ်ပစ်မည်လော သို့မဟုတ် ပါတီကို ဖျက်သိမ်းမည်လော ဟူသည့် ရွေးရခက်ခက် အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်လာ ကြရတော့သည်။
အမှန်အတိုင်းဆိုရလျှင် ထွက်ပေါ်လာသည့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူ၏ NLD ပါတီတို့ ကြုံတွေ့နေရသည့် အကျပ်အတည်းများအပေါ် မည်သူကမျှ အံ့အားတကြီး ဖြစ်မနေခဲ့ကြပါ။ ပါတီ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ရပ်တည်ချက် ဖော်ပြမှုများက သေချာကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားခဲ့ကြောင်း ပြသနေသည်။ မည်သို့အခြေအနေပင်ရှိစေ၊ အချိန်နည်းလာနေသော ယခုကာလတွင်ပင် NLD ပါတီအနေနှင့် ၎င်းတို့၏ ဘက်စုံရည်မှန်းချက်များကို ပြည့်မြောက်စေရန် မဆောင်ရွက်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိလှပါ။ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသေးသည်။ သို့သော် ပါတီ၏ ထိပ်သီးနာမည်ကျော် ခေါင်းဆောင်၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် အရေးပါမှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်မှုဖြင့် စတင်ရလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပါတီက မဖြစ်မနေ ထုတ်ပေးရမည်ဆိုပါက စစ်အစိုးရအဖို့ အောင်ပွဲဖြစ်သွားလိမ့်မည်၊ စစ်အစိုးရက တဖက်သတ် ဆောင်ရွက်နေသည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို တရားဝင် ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် ယူဆထားကြသည်။ ဤထင်မြင်ယူဆချက်များမှာ မတိကျ မမှန်ကန်လှပါ။ ထို့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများကို အခွင့်အရေး အခြေခံပေါ်မှနေ၍ လက်ခံရန် ငြင်းပယ်သည်မှာ သီအိုရီသဘောအရ ပြောလျှင် မှန်ကန်သော်လည်း၊ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် လမ်းမရှိသလို၊ မျှော်လင့်ချက်လည်း ပေးနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ပါတီ ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများမှာ အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ မဟာဗျူဟာ မျှော်မြင်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကျပ်အတည်းသာ ဖြစ်သည်။
၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲထက်စာလျှင်၊ ယခု ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံရေးအရ ပို၍ အရေးပါနေသည်။ သို့သော် သူ၏ အရေးပါမှုသည် နိုင်ငံရေးအာဏာကို တရားဝင် ရယူထားခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ဆက်စပ်မှု ရှိမနေပါ။ သူကလည်း ဤအချက်ကို ယခင်မိန့်ခွန်းများစွာတွင် ဖော်ပြပြောဆိုခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားတောင်းဆိုနေသည့် အဖွဲ့များနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူရမည့် နောက်ဆုံး အောင်ပွဲရလဒ်ကို ဖော်ပြပြောဆိုနေကြသော်လည်း၊ သူကိုယ်တိုင် အင်းလျားကန်ဘေးရှိ အစောင့်အကြပ်များ ဝန်းရံထားသည့် အချုပ်အချယ်ထဲ ဘာမျှမလုပ်နိုင်ဘဲ ထိုင်နေရသည့် အဖြစ်မျိုး ကြုံတွေ့နေရပါသည်။
အကယ်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသာ အနည်းငယ် သွားလာ၊ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခွင့်သာ ရလာပါက မြန်မာ့လူမှု အဖွဲ့အစည်းကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေရေးအတွက် သူ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ချေက လျော့နည်းကျဆင်းသွားစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ သူက NLD ပါတီနှင့် တရားဝင် ဆက်စပ်နေမှု မရှိဟု ဆိုလျှင်သော်မှ၊ နိုင်ငံရေးအရ ထိပ်ပိုင်းအာဏာ မရယူထားဘူး ဆိုလျှင်သော်မှ များစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ချေ ရှိနေပါသေးသည်။ ရေရှည်မျှော်လင့်တောင်းဆိုနေကြသည့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ကြည့်သည့် ခေါင်းဆောင်တဦး ဖြစ်သည့်အလျှောက်၊ အကယ်၍ သူကသာ NLD ခေါင်းဆောင် မဟုတ်ခဲ့လျှင် ဤသို့ အခန်းကဏ္ဍမျိုးကို ပို၍ လွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
အကယ်၍သာ ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတစွာ ကျင်းပပေးမည်ဆိုပါက ဒေါ်စုက များစွာဆိုးရွားလှသည့် စစ်အစိုးရ၏ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကိုပင် လက်ခံဖွယ်ရှိသည်ဟူသည့် ပေါ်ထွက်လာသည့် သတင်းများကြောင့်၊ အနာဂတ် နိုင်ငံရေးတွင် ဒေါ်စု၏ အခန်းကဏ္ဍကို မကြာသေးမီက ပို၍ မြှင့်တင်ပြောဆိုလာသည်လည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခု ရွေးကောက်ပွဲကိုသာ လက်ခံလိုက်လျှင် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးကို စစ်တပ်က ဆက်လက်လွှမ်းမိုးချယ်လှယ် သွားလိမ့်မည်ဟု အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်း အများစုက လက်ကိုင်ထား ပြောဆိုနေသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အထက်ဖော်ပြပါ စိတ်ခံစားမှု အခြေအနေကို ကြည့်လျှင်လည်း ဒေါ်စုက အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် အခန်းကဏ္ဍနှင့် အထူးသင့်တော်နေကြောင်း ပြသနေပြန်သည်။ ရေရှည် သံသယကြီးခဲ့ကြသည့်၊ မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေကြသည့်၊ ပြိုင်ဆိုင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းများအကြား ယုံကြည်မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ NLD ပါတီကသာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ရေရှည်တည်တံ့သည့် ခံတပ်တခုအဖြစ် ရှိစေရန် မူဝါဒများ၊ သဘောတရားများအပေါ် အခြေခံတည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါက၊ လူတဦးတည်းကို ကိုယ်စားပြုသည်ထက်ပို၍ ကြီးမားသင့်ပါသည်။ မူဝါဒများနှင့် အတွေးအမြင်များသည်လည်း လူတဦးအပေါ် မှီတည်နေသည်မဟုတ်ဘဲ အချိန်နှင့်အမျှ ဤအတိုင်း ဖြစ်ရပါလိမ့်မည်။
လက်ရှိကာလတွင် NLD ပါတီသည် မြို့ပြနေရုံးများနှင့် တက္ကသိုလ်ပုရဝုဏ်တို့မှ လွဲလျှင် လူထုထောက်ခံမှု အကျယ်အပြန့် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းတခုအဖြစ် များစွာ သံသယဖြစ်ဖွယ် ရှိနေသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၁၅ နှစ်တာ ခရီးကို ပြန်ပြောင်း၍ မိမိက အလျင်စလို သုံးသပ်ရလျှင်ဖြင့် အကယ်၍ NLD တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ မရှိတော့ပါက လူထု ထောက်ခံမှု သိသာစွာ ကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟုလည်း သုံးသပ်မိသည်။
NLD ပါတီတွင် သန္နိဋ္ဌာန် စွဲစွဲမြဲမြဲချထားကြသည့်၊ အမှန်တကယ် စွမ်းနိုင်သည့် အဖွဲ့ဝင်များက အင်းလျားကန်စောင်း နေရာမျှသာမက၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားရေးစနစ်၏ လွတ်ကင်းရာ ပြင်ပတွင်လည်း များစွာ ရှိနေကြသည်။ အကယ်၍ ထိုသူများကသာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါက ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရ အရွေးချယ်ခံရပါက ပါတီအနေနှင့် ဆက်လက် ရပ်တည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံရေးအရ ထောက်ခံနေကြသူများကိုလည်း ပို၍ ကျစ်လစ်စွာ စုစည်းနိုင်လိမ့်မည်ဟု မိမိက အကြံပြုချင်သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုက်ရိုက်နိုင်ငံရေး မဟုတ်သည့် နိုင်ငံရေး အခန်းကဏ္ဍတွင် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုလာပါက သူ့အနေနှင့် NLD ပါတီ၏ လမ်းကြောင်းကို ညွှန်ပြဆုံးဖြတ်ပေးနေသည့်၊ အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် ဆက်လက်ရှိနေမည်မှာ မေးခွန်းထုတ်စရာ မဟုတ်ဟု မြင်မိသည်။ NLD ပါတီအနေနှင့် ဒေါ်စု ရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ သူနှင့် တသားတည်း ဆက်၍ တွဲဆက်နေမည်သာ ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိစ္စ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊ ယုံကြည်မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်လာနိုင်သည်နှင့်အမျှ ယခင်က အာဃာတရှိနေကြသည့် နိုင်ငံရေးသမား ပုဂ္ဂိုလ်များအကြား အပြန်အလှန် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ရှိလာသည်နှင့်အမျှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ဖွဲ့စည်းထားပုံလည်း များစွာ ပြောင်းလဲလာရန် အကြောင်းရှိသည်။ ဤဖြစ်နိုင်ခြေမှာ ယခုကာလတွင် ရှိမနေပါ။ အတိုက်အခံများနှင့် သူတို့ကို စာနာကြသည့် နိုင်ငံတကာ မိသားစုက ဆက်လက်တောင်းဆို ကြေညာနေရုံမျှဖြင့်လည်း ဖြစ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အတိုက်အခံ အင်အားစုများအဖို့ ယခုအချိန်သည် မိမိတို့၏ ရှိနေသော အားကောင်းချက်များ (နှင့် အားနည်း ချက်) များကို အခြေခံ၍ ပေးလာသည့် နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်း အခြေအနေအတွင်း မိမိတို့၏ မဟာဗျူဟာများကို ပြန် လည်သုံးသပ်ချမှတ်ရန် အသင့်လျော်ဆုံး အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
NLD ပါတီအနေနှင့် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနှင့် စည်းရုံးရေးဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ချဲ့ထွင်ရန် အထူးလိုအပ်နေပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက်များအပေါ် အထူးတလည် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရတော့မည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ ဤအချက် ၂ ခုက လုံးဝကွဲပြား တသီးခြား ရှိနေခြင်း မဟုတ်သလို၊ တထပ်တည်း အတူတူ လုပ်ဆောင်ကြရန်လည်း မလိုအပ်ပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က NLD ပါတီ ဆက်ရှောက်ရမည့်လမ်းမှ တရားဝင် စွန့်ခွာသွားနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဤနည်းလမ်းကို မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါက တိုင်းပြည်အတွက်ရော၊ ပါတီအတွက်ပါ ရေရှည်တွင် အကျိုး ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါသေးသည်။ သို့သော် ဤသို့ စတင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရာတွင် လူ့အခွင့်အရေး အယူအဆများရော၊ တရားဝင်ဥပဒေကိစ္စများပါ ထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘဲ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ပေးလာသည့် မဟာဗျူဟာ အခင်းအကျင်းအပေါ် ကြည့်၍ ကကြရခြင်းသာ ဖြစ်ပါတော့သည်။
(Joseph Ball ၏ Revisiting the political significance of Aung San Suu Kyi ဆောင်းပါးကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြပါသည်။)
ဦးအေးသာအောင်၊ ဦးပူကျင်ရှင်းထန်၊ ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အင်တာဗျူးတွေကို
ကြားရတာ ကြက်သီးထလောက် အောင်လေးစားရပါတယ်။ သားရဲတွင်းနုတ်ခမ်းမှာ သတိကြီးကြီးလျှောက်နေရတဲ့အချိန်မှာ၊ အပြင်ဘက်ကနေ
တောခြောက်တာတွေ၊ ပိုပြီးအကြပ်အတည်းရောက်စေမဲ့ ဆရာလုပ်မှုတွေမလုပ်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
တချို့ က ကောလဟလတွေဖြန့်ပြီး အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ခြွဲခားပြောတယ်။ သိက္ခာချတွေနဲ့ခြီးမြင့်တာတွေကိုတပြိုင်တည်းလုပ်တယ်။
တချို့က ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကို အားမနာတမ်းကိုတောင်းဆိုနေတယ်။ အခုလို အချိန်မှာ မလုပ်ကောင်းတဲ့အရာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေ အဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်။
ဆရာဦးဝင်းတင်ရှိတယ်။ ဦးတင်ဦးရှိတယ်။ တိုင်းရင်းသားပါတီက ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်။ ဘာကိုပူဖို့လိုပါသလဲ။
ပူရမှာက ပြည်ပမှာ ကိုယ်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာပါ။
ပြည်တွင်းလူထုတိုက်ပွဲ နဲ့ ဝေးသွားသူတွေ က ကောလဟလဖြန့်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး အဲ့ဒီကောလဟာလတွေကို ဘလောက်တွေမှာ
လျှောက်ဖြန့်တယ်။ သမိုင်းကိုနားမလည်လို့ ဒီလိုအလုပ်ကိုလုပ်တာလို့ပဲ ယူဆပါတယ်။
ဦးအောင်ရွှေမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ဆန္ဒကို ထိခိုက်အောင် လုပ်လေ့မရှိပါဘူး။
ဥပမာ - G-7 ဖွဲ့ပြီး အစိုးရရဲ့ အမျိုးသားညီလာခံကို ပြန်လည်တက်ရောက်ဖို့ အကြံပေးဖိအားပေးတဲ့သူတွေကို ငြင်းဆန်ခဲ့ဘူးတယ်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက် သူ့ကို စစ်အာဏာပိုင်တွေက ခေါ်ယူဆွေးနွေးတ့အဲ ခါ၊ တကြိမ်ပဲသွားရောက်ခဲ့တယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မကောင်းကြောင်းပြောခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့် နဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ကို နောက်တကြိမ်မတွေ့တော့ပဲ၊
သူ့သဘောအတိုင်းမပြီးဘူး။ ဒေါ်စုတို့နဲ့ဆွေးနွေးပါ လို့ ပြောခဲ့တယ်လို့ သိရဘူးတယ်။ ဦးအောင်ရွှေသာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အလံ ကို စစ်အစိုးရ
ဆီ အပ်ပြီး သူ့ကောင်းစားဖို့လုပ်မယ် ဆိုရင် အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရခဲ့ဘူးပါတယ်။ သူမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီ သမိုင်းတွေကို အသိအမှတ်ပြုဖို့လိုမယ်။
ဒီတကွေ့မှာလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ညီညီညွတ်ညွတ်ရပ်တည်ကြ၊ ရင်ဆိုင်ကြလိမ့်အုန်းမယ် လို့ ယုံကြည်ထားတယ်။
၁၉၉၆ မေလ မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရန်ကုန်မှာခေါ်ယူပြီးညီလာခံတခုလိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်သွားလေရာကို ထောက်လှမ်းရေးတွေက အုပ်စုဖွဲ့လိုက်တယ်။
ဆိုင်ကယ်တွေ၊ ကားတွေ တတီတီအော်ပြီး လိုက်နေပုံက မျက်စိကိုရှုပ်ရှက်ခပ် ခြောက်ခြားစေတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၀၀) ကျော်ကျန်နေသေးပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခြံထဲကိုရောက်လာနိုင်တာ (၁၀) ယောက်ပဲရှိပါတယ်။
(၁) ဦးညွှန့်လှိုင် ( ပုသိမ်)
(၂) ဦးတင်ချော (ပုသိမ်)
(၃) ဦးစိုးမြင့် ( မင်းဘူး)
(၄) ဦးချစ်ကို ( မင်းလှ၊ မကွေး)
(၅) ဦးအောင်ကြည်မြင့် ( ချောင်းဆုံ)
(၆) ဒေးဗစ်လှမြင့် ( ငပုတော)
(၇) ဦးအေး ( ညောင်လေးပင်)
(၈) ဦးကျော်ခင် ( လားရှိုး)
(၉) ဦးသာမောင် ( အုတ်ဖို)
(၁၀) ဒေါက်တာမျိုးညွှန့် ( မြင်းမူ)
ဒေါက်တာမျိုးညွှန့် ဆိုရင် ထောက်လှမ်းရေးက ဆိုင်ကယ်နဲ့တိုက်ပြီး၊ သူတို့ကပဲ အမှုလုပ် ဖမ်းခဲ့တယ်။ ဒေါက်တာမျိုးညွှန့် သာ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေ နှုတ်ထွက်မယ် ဆိုရင်၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုပေးမယ် လို့ ထောက်လှမ်းရေးက ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။
ဒေါက်တာ မျိုးညွှန့် က လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်ဆရာဝန်တချို့နဲ့ ဘီပီအိုင်ဆေးဝါးတေကွို စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်နေတယ် လို့ သိရတယ်။
ကုန်ကြမ်းအတွက်ဝယ်ယူစုဆောင်းထားတာတွေကလည်း (၃၅) သိန်းဖိုးလောက်ရှိတယ် လို့ ဆိုကြတယ်။ ဒေါက်တာမျိုးညွှန့် က
အစိုးရရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တွေကို ငြင်းဆိုခဲ့တာကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်ခဲ့ရသလို၊ ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးခြင်းကိုလည်းခံလိုက်ရတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေ အစိုးရဧည့်ဂေဟာတွေမှာ ထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်- တချို့ နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။
မောင်မိုးသူ၊ မောင်ဝံသ၊ ဦးအေးဝင်း၊ ဦးဝင်းထိန်၊ ဦးကျော်မင်း ( ထောင်တွင်းကျဆုံး)၊ ဦးသိန်းတင်-- အပါအဝင်
ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စစ်အာဏာပိုင်တွေ ဒီလိုလုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာ သိလို့
ခြံထဲကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်လာဖို့မှာတယ် လို့ ဆိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သွားသွား၊ ဘာလုပ်လုပ်၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေကို သတင်းပို့နေတဲ့
သစ္စာဖောက်တွေရှိသလို၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လိုက်နှောက်ရှက်တဲ့ စစ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လက်ကိုင်တုတ်တွေကလည်းလက်ရက်ဇက်ရဲ
( ကိုခွန်မြင့်ထွန်း လည်း အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်မို့လား။ ကျနော်ရေးတဲ့အထဲမှာ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေ၊ မှားနေတဲ့အချက်တွေရှိရင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က လက်မလျော့ခဲ့ပါဘူး။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ( ၆) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့
၁၉၉၆ စက်တင်ဘာလမှာ နယ် က ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အရေးပါတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကို ခေါ်ယူပြီး အခြေအနေတခုကိုတည်ခင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
စစ်အာဏာပိုင်တွေကလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေကအစ လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေ၊
ခေါင်းဆောင်တွေကို လူထုနဲ့ပေါင်းစပ်လို့မရအောင် နှိပ်ကွပ်ခဲ့ကြတယ်။
အနှစ် (၂၀) လုံးလုံး၊ အကျဉ်းထောင်၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ကြံမှု၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုတွေ ပြည့်နှက်နေအောင် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က
ခေါင်းဆောင်တွေ ဒီကနေ့အထိ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ညှိနှိုင်းတွေ့ဆုံနေကြ၊ ရင်ဆိုင်ဖို့ အားမွေးနေကြတာ ဂုဏ်ယူလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်။
ပြည်ပကနေ သူများ ကို တိုက်စီတိုက်မောင်းတီးတောခြောက်ချင်ရင်
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ခြင်္သေ့လိုပြင်ဆင်ရပါတယ်။ ခပ်ကွင်းကိုရှင်းရပါတယ်။
အန္တရာယ်ကြားက လူတွေကို ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့စေချင်တဲ့ MPU လို့ခေါ်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်များ ကိုလည်း ကျနော်တို့က
တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဦးဆောင်ဖွဲ့တဲ့ စစ်တပ် တတပ်လောက် ကို ကျနော်တို့မြင်ချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်လွတ်မြောက်ဒေသတခုလောက်ရဖို့ ကြိုးစားပေးစေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသီအိုရီက ရှင်းပါတယ်။
အစိုးရဖွဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်ရှိရတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လွတ်မြောက်ဒေသရှိရပါတယ်။ အခြေခံသီအိုရီတောင်မရှိခဲ့လို့ စင်ပြိုင်အစိုးရလည်း
ဝေဖန်ခံမှုတွေပလူပျံ၊ ဇာတ်သိမ်းတော့မဲ့ဆဲဆဲ-- သမိုင်းကိုသင်ခန်းစာယူစေချင်ပါတယ်။
စိုးရိမ်ကြတာကိုလည်း နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနည်းအရလည်း ကိုယ့်အယူအဆကို တင်ပြပိုင်ခွင့်ရှိတာကို သဘောပေါက်ပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ပြင်ဆင်မှုမရှိပဲ အဝေးကို လှမ်းတောင်းဆိုနေတာတွေကို ကြည့်ရတာ၊
နတ်ကန္နားပွဲမှာ ဗိန်းမောင်းတီးရင်း နတ်ပူးချင်ရောင်ဆောင်နေတဲ့ လူတွေကိုကြည့်နေရသလိုပါပဲ။
ကျနော်တို့တတွေ-- ပတ်စာခွာ၊ ပွဲသိမ်းပြန်တဲ့ ခဏတဖြုတ်ဆူညံတဲ့ နတ်ကန္နားပွဲတွေကို ဆက်မကြည့်ချင်တော့ပါဘူး။
သူများကိုဖြစ်စေချင်ရင် မိတ်ဆွေတို့လည်း လေးလေးနက်နက်ပြင်ဆင်စေချင်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေမှာ မြေပေါ်လူထုတိုက်ပွဲ နဲ့ အကြပ်အတည်းပေါင်းစုံကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။
အန္တရာယ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မဲ့ အချိန်က ရက်သိတ်မလိုတော့ပါဘူး။ ကျနော်တို့တတွေ လက်တွေ့ကျကျဘာကူညီနိုင်ကြမလဲ။
ဘုရားသားတော်များ၊၊ ကျောင်းသားများ၊ တိုင်းရင်းသားညီအကိုများနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခြံအတွင်းသို့ နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံတက်ရောက်ရန်အတွက် ရောက်လာနိုင်ခဲ့သော
ပြည့်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တချို့၏ အမည် နှင့် မဲဆန္ဒနယ်မြေများ ကို ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပေးစေချင်ပါတယ်။
ဦးချစ်ကို ( မကွေး၊ မင်းလှ) အစား ဦးချစ်တင် ( မကွေး၊မင်းလှ)၊
ဒေါက်တာမျိုးညွှန့် ( မြင်းမူ) အစား ဒေါက်တာမျိုးညွှန့် ( ဒေးဒရဲ) အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖတ်ပေးစေလိုပါတယ်။
စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ က ဦးကျော်ခင် ( တောင်ကြီး) ကို ရထားပေါ်မှာ ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာကြောင့်
ဦးတင့်ငွေ ( စစ်ကိုင်းတိုင်း) ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ခြံထဲကို ရောက်လာတဲ့ လွှတ်တော်အမတ် (၁၀) ယောက်အနက်၊
ဦးကျော်ခင် ရဲ့နေရာမှာ ဦးတင့်ဝေ ကို အစားထိုးဖတ်ပေးစေလိုပါတယ်။
သန်းဝင်း ၇၂၇- ၆၅၆- ၈၉၂၂
အောင်မိုးဝင်း ၅၈၅- ၉၅၇-၆၄၅၂
ဖြိုးဝေလွင် (ခ) ဖိုးခွား ၉၁၇- ၃၄၉- ၂၁၆၉
http://www.mediafire.com/?42oimmmn5mj100311 VDI PB3 Election Commission LawaPolitical Analysis
(၁၄ မတ် ၂၀၁၀)
ထို့နောက် MPU (Members of Parliament Union) မှ တာဝန်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက မတ်လ (၁၃) ရက် ဖုန်းမော်နေ့အခမ်းအနားတွင် တိုက်တွန်းခဲ့သည့် “လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားပါတီများ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPP) ကို လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) တာဝန်သိ သည့် တာဝန်ရှိသည့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များကိုလည်းကောင်း ပြည်သူ့အစိုးရတရပ် အမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းရန်တိုက်တွန်းကြောင်း၊ ပေါ်ပေါက်လာမည့် ပြည်သူ့အစိုးရကို တခဲနက် ထောက်ခံ အားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း”
အထက်ကစာပိုဒ်က ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဘလောဂ်မှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းကော်ပီကူးပြီးဖေါ်ပြလိုက်တာပါ။
တိုက်တွန်းသူက (အမ်ပီယူ)က တာဝန်ရှိပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ပြီး ကိုယ့်ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုဘယ်သူ့မှာမဆိုတိုက်တွန်းနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျနော့်အနေဖြင့် ဘာမျှမပြောလိုပါ။
တိုက်တွန်းချက်မှာပါဝင်နေတဲ့ နည်းလမ်းကိုတော့ ပြောချင်ပါတယ်။
တိုက်တွန်းချက်ရဲ့ အဓိကသဘောထား ကတော့“ပြည်သူ့အစိုးရဖွဲရေး” ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းလမ်း(၂)မျိုးအနက် ပထမတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ “လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားပါတီများပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPP)ကိုလည်းကောင်း”ကို ဘာမျှမပြောလို ပါဘူး။
ဒုတိယတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ “တာဝန်သိသည့် တာဝန်ရှိသည့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက် ခြင်းခံရသည့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကိုလည်းကောင်း” ဆိုတဲ့ အပိုင်းကိုတော့ ဆွေးနွေးပါရစေ။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတာကတော့ ဒီဥပဒေတွေက အဖွဲ့ချုပ်အတွက်ရော၊ အားလုံးအတွက်ပါ တကယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေပဲ။ အဲဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြဖို့လိုတယ်။ ပြည်သူလူထုကလည်း ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့၊ စိန်ခေါ်မှု တွေ ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ ညီညွတ်ဖို့၊ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ ရှိဖို့လိုတယ်လို့ အဲဒီလို ပြောတာပါ။ ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့၊ ကျော်ဖြတ်ဖို့၊ ကျော်လွန်ဖို့၊ အောင်မြင်ဖို့ဟာ ပိုပြီးတော့ ညီညွတ်မှု ရှိရှိနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတယ်တဲ့။”
ဒီကနေ့အခြေအနေမှာ တညီညွတ်တည်း ရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတလူငါတမင်းနဲ့ ထင်သလိုမြင်သလိုလုပ်ကြရင် (နအဖ) စစ်အစိုးရကသိပ်ကြိုက်မှာပါ။ ဒီလိုညီညွတ်ရေးပြိုကွဲချိနဲ့စေမယ့် စေတနာဆိုးအကြံယုတ်တွေဟာရုံးတချို့ဖွင့်ခွင့်ပြုတာထဲမှာပါဝင်နေမှာ သေ ချာ ပါတယ်။
ကိုဖုန်းမော်နေ့အခမ်းအနားမှာ (အမ်ပီယူ)က တာဝန်ရှိသူတိုက်တွန်းချက်ဟာ မရည်ရွယ်သော်လည်း တညီတညွတ်တည်းဆောင် ရွက်ရေးပြိုကွဲစေဖို့ကြိုတင်လှုံ့ဆော်အားပေးထားသလိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီလိုလှုံ့ဆော်အားပေးမှုမျိုးကိုတာဝန်သိသည့်/တာဝန်ရှိသည့် ၁၉၉၀ပြည့်နှစ်ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှရွေးချယ်တင်မြှောက် ခြင်းခံထားရတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်မပြုမူ/မပြောဆို သင့်ဘူးလို့ လေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ယူဆပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPP) တို့ကမဆောင်ရွက်လျှင်ကျန် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရေလာမြောင်းပေးပြောဆိုတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာကို ကျနော်ပြောချင်တာ ပါ။
(နအဖ)စစ်အစိုးရရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈) နဲ့ မကြာခင်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဥပဒေ (၅) ခုကို ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး အတွက်ပြည်တွင်း/ပြည်ပ၊ ဥပဒေတွင်း/ဥပဒေပ၊ တိုင်းရင်းသားနှင့်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုအားလုံး၊ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက တညီတညွတ် တည်း လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကိုသာလှုံ့ဆော်စည်းရုံးသင့်ပါတယ်။
(နအဖ)စစ်အစိုးရ ရဲ့ စိန်ခေါ်ချက်ကပြင်းထန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလိုအချိန်မှာသွေးစည်းညီညွတ်ရေးကို မထိခိုက်စေသင့်ပါ။
သွေးစည်းညီညွတ်ရေးကိုထိခိုက်နစ်နာစေမယ့် အပြုအမူအပြောအဆိုများကို အားလုံးက သတိထားသင့်ပါကြောင်း။
Monday, March 15, 2010 As of 1:47 PM EDT
MARCH 15, 2010, 1:47 P.M. ET
Myanmar dissident Cho Cho Kyaw Nyein, 62, recently spoke with The Wall Street Journal about why she's running in the election expected sometime this year, the opposition stance on the military regime and more. Below is an edited transcript.
The Wall Street Journal: Are you standing for this year's election in Myanmar?
Cho Cho Kyaw Nyein: Yes, I am. My party members and I met and we decided to stand for the election. We are talking to people to join us and be candidates for our party. Soon we will know how many will be our candidates.
WSJ: Do you think the vote will be fair?
Ms. Kyaw Nyein: Well, it was fair in 1990. Now, 20 years later, I can only hope it will be fair. I cannot say it is going to be fair or unfair.
WSJ: Given the possibility of irregularities in the vote, why are you interested in running?
Ms. Kyaw Nyein: The reason why I decided to participate is this: For 20 years, we were governed by army personnel. Not one civilian was included in the regime. After this year's elections, 75% of civilians will be elected, and 25% from the army will be in the government. A mixture of civilians and army personnel will work together. After four years [after further elections], more civilians will be elected. Let us hope there is understanding between the army personnel and the civilians and that they will work together. We have been fighting since 1988 and we have not come to any agreement. By working together, there will be understanding between the army and the ordinary people.
WSJ: What is your background in political activity?
Ms. Kyaw Nyein: I have beenapolitician since 1988. My father was one of the first deputy prime ministers. When [former Myanmar strongman] Ne Win took power, my father was in solitary confinement for seven years; my mother for three andahalf years; my husband for three andahalf years; my two brothers for seven years. In 1990, I was sentenced to seven years. I firmly believe that beingamember of my family, beingadaughter of well-known politicians, I would like to work for my country and my people.
WSJ: Can you describe your political organization?
Ms. Kyaw Nyein: The name of the party is the Democratic Party. We are nowagroup of politicians who are willing to take part in the election. We meet from time to time at anniversaries or birthday parties. We cannot meet asapolitical group because the laws do not allowameeting of five or more people if not registered.
WSJ: How are your organizing and preparing for the elections? How will you campaign?
Ms. Kyaw Nyein: I firmly believe that we must try to convince the people about the elections and our stand. Lots will say they are with us. They firmly believe we are true politicians. They say that if and when elections come they will vote for us. They cannot openly now say they support us. Softly, they say [they will]. We go from place to placeafew places atatime. I have no choice but to meet in small groups.
WSJ: Has the government harassed you?
Ms. Kyaw Nyein: It was worse in 1988. Up till now, we are not friends, but we are not enemies either. I have been bullied and harassed since Ne Win came to power. At that time, my father was an opposition leader. We have gone through this treatment since 1962. Not everyone can stand it. I've hadavery traumatic life. Every part of my body has scars. We lost many lives of our dear ones. I am 62, so I say: Why do we continue this fight? We've got to negotiate with the army for the sake of the people and the country. We get along, we can negotiate, we can work for the people and the country. We have suffered for so long. I haveachance to go out [of Myanmar] but I don't go because I want to change the fate of my country. I want to help my people.
WSJ: Have any members of the opposition criticized you for planning to take part?
Ms. Kyaw Nyein: Yes,alot in the beginning. [They were] saying that if we don't recognize the coming elections, the present regime will talk with the opposition parties and negotiate. We have offered to negotiate with the regime for 20 years; they did not care, they did not giveareply. So if we declare we are not going to take part in the elections, the military will govern for the next 100 years.
WSJ: Have you heard when the election will be? Do you think the government will give candidates enough time to prepare?
Ms. Kyaw Nyein: I firmly believe there will be an election but I don't know when. If there is an election and if we declare we don't want to take part, [the military] will continue with their plans. And the Burmese people with votes in their hands won't know who to vote for. So, let there be civilian politicians so that the Burmese people can choose. Now some of the opposition agrees with us.
WSJ: What do you think of the election laws released recently by the Myanmar regime that bar Aung San Suu Kyi from running and impose other requirements for participating?
Ms. Kyaw Nyein: The law says that detainees presently in jail cannot stand for elections. I feel sorry for them. They are detained because of their consciences [as political prisoners]. The NLD is complaining mainly because Aung San Suu Kyi will not be eligible to stand for elections. If ex-detainees are not included, it would mean one-fourth of the country will not be eligible to stand for elections.
The new laws require the 10 legal parties in Burma [one that is pro-government and nine opposition parties, including the NLD] to re-register within two months' time, failing which the parties would be abolished automatically. Whether we like it or not, we have to accept this. In my opinion, this particular law was aimed at the NLD. The NLD has been asking the government to amend the constitution, failing which they will not participate in this election. If the NLD does not participate, of course it is good for the government but, the government will lose face because the whole world has been asking for an all-inclusive election. I believe if the NLD participates in the election, they will win some seats.
WSJ: Do you think the NLD should participate in this election? Will that help or harm your party? Is the opposition united or fragmented leading up to the vote?
Ms. Kyaw Nyein: I think the NLD should participate. I hope they will join us. if Aung San Suu Kyi is freed, I hope she will participate. Our fathers were the best of friends. I really respect her. The opposition are all friendly. [We are] walking in the same direction. But when it comes to elections, some do not agree, some do. Although we are united in mind, when we come to elections, I cannot say all are united.
WSJ: Do you think other candidates will come forward. If so, who are some of the other likely candidates? What is the "Third Force?"
Ms. Kyaw Nyein: A lot of politicians are prepared to be candidates. Most of them are from NLD. One person is Thu Wai [a longtime dissident and chairman of the Democratic Party], who has been in the political grounds for 45 years. He has been detained several times.
[Regarding the] "Third Force," some people call us that. We are not with the NLD, we are not with the government. We are in the middle. We are formed for the sake of the country and the people. Let's hope that we will be successful. We are sure we will be successful. A lot of people have come to understand that there is no point fighting with the present regime.
WSJ: Will good things come from this election?
Ms. Kyaw Nyein: Let's hope. I hope that ifanumber of civilian politicians are elected, they will work together with the soldiers for the sake of the people.
WSJ: What should the outside world do in terms of observing this election? Is there anything it can do to help? Should it condemn the election or endorse it?
Ms. Kyaw Nyein: I am sure people all over the world are following keenly what's happening in Burma. [But] I have very little knowledge of what powerful people in the outside world do. I don't know how they can help but would be happy if they can help in any respect, especially to make itafree and fair election.
The outside world, whether it endorses or condemns the election, will not affect the present government. For many years they haven't cared that the world criticizes [them] and they will still go on.
My party members and I met with ambassadors from the EU [on March 9] at the German ambassador's home. Present were ambassadors from Britain, Netherlands, Spain and Italy. They were interested in our views on the coming elections. They wanted to know if we were standing for elections. They said they will be watching the elections closely. They asked if they could help in any way. We thanked them but said no because we cannot accept help from any foreign country. Of course, the offer was made informally.
သူကတော့ဘီဘီစီကပါ။မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ကို စိတ်ဝင်စားသူတိုင်းအမြင်တွေကိုသူ့ဆီပို့ပေးစေလိုပါတယ်။
From: Mary Meadowfield
This is Krassi,
I am now writing to ask if you would like to send me your views on the situation with regards to the forthcoming elections in Burma. The election law were announced, clarifying who can take part etc and although no date has been announced, they are expected to take place later in the year.
We would like to publish on the news website views of people in Burma about the first elections in 20 years. Below areafew questions - I would really appreciate it if you can send me your answers.
What is your reaction to the election laws?
Do you agree with foreign critics that it'samockery, because they are not allowing the opposition to take part?
Should the opposition be able to take part?
What do you think will the election achieve? What kind of change will it bring?
And finally, what are your hopes for the future of the country?
We never publish real names, not to put people danger, but please advise what name you would like your comment to appear with. Thank you for your time, I look forward to hearing from you.